Jawi Amaandaro oo lagadareemayo jig-Jiga – Ahmed A. Abdulahi
Jawi Amaandaro oo lagadareemayo jig-Jiga
AhmedAbdiAbdulahi	Uncategorized	 October 31, 2018 1 Minute
Waxaa magaalada jigjiga laga dareemayay saansaan amaandaro xalay fiidkii ilaa qaybo kamida maanta. Xiisadan amaandaro ayaa ah mid cusub taasoo waxsal ah aankuhayn xiisado horey usiijiray.
Ciidamo cusub oo militariga itoobiya kamida ayaa lagu arkayay wadooyinka waawayn ee magaalada Jigjiga. Ciidamada ayaa kuhubaysnaa qoryo waawayn kuwaasoo Cabsigalinayay qaarkamida Bulshada Rayidka ah.
Sicad uma cadaykaro waxa ay salka kuhayaan Rabshadahani laakiin warar aan kasooxigtay dad xogogaala ayaa iicadaynaya in iskudhcyo udhaxeeya Dhalinyaro gadoodsan iyo Jabhada Xoraynta Ogaadeeniya ee JWXO kuwaasoo xubno kamida ay kusuganyihiin magaalada caasimada ee Jigjiga.
Rasas ayaa xalay ilaa maanta duhurkii lagamaqlayay qaybo kamida suuqayada magaalada Jigjiga kuwaasoo dareen amaandaro ku abuuray dad badan oo kunool magaalada Jigjiga. Xaalada magaalada Jigjiga ayaa umuuqata mid Dagan walaw ayjiraan Ciidamo militari iyo kuwa gaarka ee deegaanka Soomaalida ee Liyu Poliska looyaqaano.
Qoraalkaygani Waa mid ubadan xago aan kahelay dad rayid ah oo goobjoog u ahaa xiliyaadii ay iskudhacyadu dhacayeen iyo mid aan sitoos ah U arkay mar aan dhex socday qaybo kamida magaalada Jigjiga. Way adagtahay in lagabixiyo qiyaas waxa xigikara laakiin Jawiga Caasimada ayaa Umuuqda mid hada Xasiloon.
Waxyaabaha kusookordha Magaalada Jigjiga waxaan idiinkuugudbinayaa kana akhrisankartaa Bartayda internetka WordPresska ee http://www.whatsupsomalia.wordpress.com
Previous Post a record breaking number of deaths in the capital Mogadishu is worrying every Somali
Next Post Abdirashiid Ali Shua’s trust; A “Broken glass”